ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်: Ms Jiang
Suture မဟုတ်သောယက် Fusible F8025 အနားသပ်ရောင်းချ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: WEIBOFZ 2. ပုံစံများအမှတ်: F8025.W 3. MOQ: 3000m / အရောင် 4. ပစ္စည်း: 100% polyester မျှင် 5. Feature ကို: fusible, ကော်, elastic, shrink- Suture မဟုတ်သောယက် Fusible F8025 1. အမှတ်တံဆိပ်အနားသပ် ခံနိုင်ရည်, ခဝါချမှု, heatroof 6. Technical: မဟုတ်တဲ့ယက် 7.Dyeing & ပြီးဆုံး: ဖောက်သည် '' အညီ 100 အ / 200 / စတုရန်းမီတာ 300 / လိပ်, အသေးစိတျ: အဝတ်အိမ်အထည်အလိပ်, အိတ်, ကစားစရာများနှင့်ဒါ 9. Pack အပေါ်: 8. အသုံးပြုမှု coating လိုအပ်ချက် 10. FOB ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ဟိုင်း, တရုတ် 11. မူလအစ: Zhejiang, တရုတ် 12. ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို: T / T အဓိကအား
post ကိုအချိန်: 2017-06-23သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်: 2017-09-04
post ကိုအချိန်: 2017-06-26သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်: 2017-09-04
post ကိုအချိန်: 2017-06-26သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်: 2017-07-06
100 ကို * 300D အထည်ချုပ် fusible interlining ရောင်းချ
WEIBOFZ 2. ပုံစံများအမှတ်: W1030.B 3. MOQ: 3000m / အရောင် 4. ပစ္စည်း: 100% polyester မျှင် 5. Feature ကို: fusible, ကော်, elastic, shrink- ကုန်ပစ္စည်းအမည်: 1. အမှတ်တံဆိပ် interlining ပေါင်း 100 * 300D အထည်ချုပ် fusible ခံနိုင်ရည်, ခဝါချမှု, heatroof 6. Technical: ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ 100 အ / 200 / စတုရန်းမီတာ 300 / လိပ်, အသေးစိတျ: 8. အသုံးပြုမှု coating: အဝတ်အိမ်အထည်အလိပ်, အိတ်, ကစားစရာများနှင့်ဒါ 9. Pack အပေါ် 7.Dyeing & ပြီးဆုံးယက် 10. FOB ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ဟိုင်း, တရုတ် 11. မူလအစ: Zhejiang, တရုတ် 12. ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို: T / T အဓိကအား
post ကိုအချိန်: 2017-06-23သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်: 2017-06-30
elastic fusible interlining ရောင်းချ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: elastic fusible interlining 1. အမှတ်တံဆိပ်: WEIBOFZ 2. ပုံစံများအမှတ်: SM75 3. MOQ: 3000m / အရောင် 4. ပစ္စည်း: 100% polyester မျှင် 5. Feature ကို: fusible, ကော်, elastic, ကျုံ့ယဉ်, ခဝါချမှု, heatroof 6. Technical: ယက် 7.Dyeing & ပြီးဆုံး: အဝတ်အိမ်အထည်အလိပ်, အိတ်, ကစားစရာများနှင့်ဒါ 9. Pack အပေါ်:: 100/200 / စတုရန်းမီတာ 300 / လိပ်, အသေးစိတျဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက် 10. FOB ဆိပ်ကမ်းသည်နှင့်အညီ 8. အသုံးပြုမှု coating: ရှန်ဟိုင်း, တရုတ် 10. မူလအစ: Zhejiang, တရုတ် 11. ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို: T / T အဓိကအား
ထုပ်ပိုးပြီးထိုးပြီး fusible interlining ရောင်းချ
5903909090 1. အမှတ်တံဆိပ်: WEIBOFZ 2. ပုံစံများအမှတ်: W282.W 3. MOQ: 3000m / အရောင် 4. ပစ္စည်း: 100% polyester မျှင် 5. Feature ကို: fusible, ကော်, elastic, ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ထိုးပြီး fusible interlining HS CODE ကိုခြုံ ခံနိုင်ရည်-ကျုံ့, ခဝါချမှု, heatroof 6. Weave: Twill / ရိုးရိုး 7.Dyeing & ပြီးဆုံး: 8. အသုံးပြုမှု coating: အဝတ်အိမ်အထည်အလိပ်, အိတ်, ကစားစရာများနှင့်ဒါ 9. Pack အပေါ်: 100/200 / စတုရန်းမီတာ 300 / လိပ်, အသေးစိတျအညီ ရှန်ဟိုင်း, တရုတ် 10. မူလအစ: Zhejiang, တရုတ် 11. ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို: ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက် 10. FOB ဆိပ်ကမ်းမှ T / T အဓိကအား
75D နှစ်ဆ dot polyester fusible interlining ရောင်းချ
WEIBOFZ 2. ပုံစံများအမှတ်: W175.B 3. MOQ: 3000m / အရောင် 4. ပစ္စည်း: 100% polyester မျှင် 5. Feature ကို: fusible, ကော်, elastic, shrink- ကုန်ပစ္စည်းအမည်: 1. Brand ဆို interlining 75D နှစ်ဆ dot polyester fusible ခံနိုင်ရည်, ခဝါချမှု, heatroof 6. Weave: Twill / ရိုးရိုး 7.Dyeing & ပြီးဆုံး: 8. အသုံးပြုမှု coating: ဖောက်သည်အညီ 100 အ / 200 / စတုရန်းမီတာ 300 / လိပ်, အသေးစိတျ: အဝတ်အိမ်အထည်အလိပ်, အိတ်, ကစားစရာများနှင့်ဒါ 9. Pack အပေါ် '' လိုအပ်ချက် 10. FOB ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ဟိုင်း, တရုတ် 10. မူလအစ: Zhejiang, တရုတ် 11. ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို: T / T အဓိကအား
post ကိုအချိန်: 2017-06-26သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်: 2017-06-30
30D နှစ်ဆ dot PA ဆိုပြီး fusible interlining ရောင်းချ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: 30D နှစ်ဆ dot PA ဆိုပြီး fusible interlining HS ကုတ်: 5903909090 1. အမှတ်တံဆိပ်: WEIBOFZ 2. ပုံစံများအမှတ်: W130.W 3. MOQ: 3000m / အရောင် 4. ပစ္စည်း: 100% polyester မျှင် 5. Feature ကို: fusible, ကော်, elastic, ကျုံ့ယဉ်, ခဝါချမှု, heatroof 6. Technical: ယက် 7.Dyeing & ပြီးဆုံး: coating 8. အသုံးပြုမှု: အဝတ်အိမ်အထည်အလိပ်, အိတ်, ကစားစရာများနှင့်ဒါ 9. Pack အပေါ်: 100/200 / စတုရန်းမီတာ 300 / လိပ်, အသေးစိတျအညီ ရှန်ဟိုင်း, တရုတ် 10. မူလအစ: Zhejiang, တရုတ် 11. ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို: ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက် 10. FOB ဆိပ်ကမ်းမှ T / T အဓိကအား